Dacwad ka dhan ah guddoomiyaha Diinsoor oo ka billaabaneysa Baydhaba
07 October, 2019 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Warar ay heshay Caasimada Online ayaa xaqiijinaya in ehelada dad lagu laayay degmada Diinsoor ee gobalka Bay ay dacwad ka dhan ah guddoomiyaha Diinsoor ka billaabeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay.
Dadkaan ayaa ka cabanaya dilal dhacay sanado kala duwan, dad xabsiyo ku raagay oo aan Maxkamad xukumin, shacab la xiray oo la waayay nolal iyo geeri, caburin iyo hanjabaad joogto ah, taas oo ka imaaneysa maamulka degmada.
Guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur (Shigshigow) oo muddo dheer maamulaya degmadaasi, ayaa lagu eedeeyey inuu muulka degmada ku koobay qoyskiisa, sidoo kalena halkaasi lagu laayay dad badan oo shacab ah oo ka soo horjeestay maamulka kadib tacadiyo ka dhacay Diinsoor.
Warar kale oo laga helay Diinsoor ayaa sheegaya in dhalinyaro badan oo laga qabtay Diinsoor loo gacan geliyay Ciidamada Itoobiya oo ku xoogan degmadaasi.
Saraakiil ka tirsan masuuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa Caasimada Online u sheegay in guddoomiyaha looga yeeray Baydhabo islamarkaana dhowaan la dhageysan doono eedeymo ka dhan oo ku saabsan xadgudubyo ka dhacay Diinsoor.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in la sugayay inta uu dib uga soo laabanayo Baydhabo, wararkii ugu dambeeyay ayaa soo sheegaya in shalay uu gaaray Baydhabo Madaxweyne Lafta-gareen islamarkaana uu kulan la qaadan doono Guddoomiyaha eedeysan ee degmada Diinsoor.
Degmada Diinsoor ayaa laga Soo Sheegayaa Cabsi Xoogan Caaawa
Dhaawaca Guddoomiyaha Gobolka Banaadir & Xubno kale oo dibada loo qaadayo
Puntland oo xabsiga dhigtay Guddoomiyaha Guddiga dhismaha Waddada Boosaaso
Madaxweynaha Puntland oo magacaabay Hanti dhowrka iyo Guddoomiyaha Bangiga dhexe
MW Farmaajo oo qaabilay u qaybsamaha Dhanka taageerada howlgalada ee Xoghayaha QM
Wasiirka Gaashaandhiga" Waxaan kordhinay howgallada ka dhanka ah Al-Shabaab"
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 39146
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 34274
Hadakii Ra'isul Wasaare Kheyre oo Jug culus ku noqotay Madaxweyne Farmaajo Visits: 49
Maxaa Kasoo Baxey Kulankii Framaajo, Kheyre iyo Labada Gudoomiye ee Maanta Visits: 49
KULANKII DOWLADA FEDERAALKA & MAAMUL GOBOLEEDYADA SHIRKOODA LOOGA GOGOL XAARAYEY OO FASHIL KU DHAMAADEY. Visits: 184
Dowladda Somalia oo Mishiinada Ogsijiinka & qalab kale gaarsiisay Jubbaland Visits: 25